Kusvira Musikana Magumbo musikana wandaiti sisi pamutupo
Kusvira Musikana Magumbo wandaiti Sisi Pamutupo
Posted on December 26, 2019 April 5, 2020
KUSVIRWA NYORO BABA MWANA VAKATARISA
Kusvira Musikana Magumbo -Story by Chitovanyo
Ndaigara zvangu ndega muimba yebasa, and during weekends ndaitora zvangu novel 📖 yangu ndogara panze ndichiverenga pasi pomumengo. Nzvimbo yatinogara inopisa saka outdoor the best. Padhuze paidarika vanhu vakawanda sezvo yainge iri nzira huru. One day ndakutokotsira nebhuku pamakumbo ndakanzwa ndakuzunungutswa, zvikanzi munotengesa here muriwo wenyu uyu mugarden.Ndakapepuka one time ndichibva ndaona inga ndimaiWinnie. Vazhinji vaingomudana nefirst name yake kuti Concie for Concillia.Ndaingomuona hangu achidarika ndichingoti uyu anoda kumbosvirwa chete. Akanga achangobva kukonana nemurume wake atodzoserwa kumba kwavo. Vaitaura vaiti akanga adzingirwa kusvirisa. Taingozvinzwa tichingoti hameno ikoko.
Murivo ndotengesa kana muchiuda Mai Winnie ndakadaro ndichishama nyai. Vakabva vaseka zvikanzi aaa mungatengesera ini hanzvadzi yenyu. Ndakashamisika ndikati munoera chii nhai mi. Ndoera gumbo ini, ndakanzwa zvichinzi muri Chitova imi. Akadaro achitopinda mugarden. Saka kana zvakadaro tanhai henyu mundopa chizukuru changu, ndakadaro ndichitosimuka kutasanura makumbo. Zvino akanga ongozavaza twakawanda. Apedza kutanha akabva auya pandakanga ndiri ndokutaura nezwi pasi pasi. Ko land-line phone yenyu mobhadharisa here. I was not surprised sisi vakanga vawana mukoto wavo. Moda kufonera ani nhai sister vangu Magumbo. Zvikanzi ndoda kufonera mukwasha wenyu kubasa ndoda mari yenyama. Apa aireva murume akanga amudzingirira. Ndakabva ndawana mukana wokubvunza, ko muchiri mese here ndoona sokuti ava noumwe mukadzi wani.Akaseka zvikanzi upikovo benzi here riya, anouya achinditora tondotamba kuma lodge uko. I am was not surprised. Concillia was beautiful, nesu taitodavo zvino ini ndakanga ndanyura Vakabva vaita sisi.
Ndakamuti apinde afone. Vakatanga kuita nyaya dzavo vachiyemerana pafon. Ini ndakanga ndongotyira bill. Concillia kutokangamwa kuti akumbira fon. Ndakanga ndakamira zvangu pahwindo ndiripanze ndichinzwa nyaya dzavo. Havo vakutotaura zvekuronga kundosvirana pafon yangu ini ekele. Ndakakosora ndichipinda mumba, hana yangu yakarova kuwana hanzvadzi yakavhura zvayo makumbo yakagara pacheya yaigara padhuze nefon. Akakurumidza kugadzira nguvo yake asi ndakanga ndatoona mberi, apa mboro yangu yatokoshiwa zvemutupo. Akazopedza kutaura achiti ndakumbira fon kuna blaz vangu vatinogara navo muvillage yedu. Maita basa bhudhi, saka imarii. Ndaseka zvangu ndikati don’t worry mozobhadhara next time. Akabva aenda. Ndakasara nemboro yakamira ndokurova zvangu bonyora. Shit that was close ndakadaro ndichipukuta mboro.
Kusvira Musikana Magumbo
Ndakaenda kuclub ndokundorova hangu hwahwa hwangu ndokudzoka kuma7 manheru. Ndichingopinda mumba ndakanzwa gogoi. Concillia again akanga adzoka. Bhudhi ndokumbiravo foni ndoda kubata mukwasha wenyu pacell yake. Ndakati moziva here zvinodhura can you afford that. Zvikanzi just a minute. Ndakangoti OK. Akabva agara pacheya iya kwakutanga kufona. A minute turned to 5 aaa havo votoridza zvikwee ndikati vakomana ndichamama nebill. Ataura achitambisa makumbo, kuvhura nekuavhara apa akanga auya akapfeka mini skirt yewhite nekablouse kaisiya guvhu panze.
Chitova ndozvavasingadi manje. Kutamba uchindiratidza zvidya netumalace lace mmm unokuvara.Akazosara opedza kufona ndakutofemera mudenga sendere. Paakapedza kufona handina kutaura naye ndakangogwadama paakanga ari ndokubva ndatanga kumubata zvidya ndichipurudzira. Haana zvaakataura akango ndotarira mumaziso akaona kuti hapana nyaya kutosvirwa chete. Ndakanga ndisina nguva. Ndakamubata maoko ndokumusumudza. Ndakamushozhonodza ndokumubatisa cheya akakotama. Ndakawetsura Chitova mubhuruku ndokusimudza kaskirt, ndakandonzera pant padivi ndokubaya baya pamukova wenyo nemboro. Iye akaita yokutevera nechiuono. Ndakapinda yose ndokumboti zii. Mhata yaidziya zvisina mukare akaona. Iye akangoti nhasi hangu. Varume ndakatanga kukoira kuti one, two, three and aaa ndakanga ndagarisa. Ndakanzwa machende achiunyana ndikaziva kuti ndakutotunda ini. I didn’t care taizozviona pasecond round zvedambarefu. Ndakabowa sehandira ndichidira mafuta erudo muhanzvadzi.
Ndakaramba ndakabata chiuno yakanyura mboro and slumped on her back. Shit.
Get Notifications of New Posts Each Time Vanoda Zvinhu POSTS a new story!
Never miss an update from VanodaZvinhu – just enter your email address below and you will get an email every time we publish news stories!
Tags: kusvira chiherakusvira magumbokusvira mamoyokusvira mancubekusvira masibandakusvira mutupokusvira mutupo umwechete
Kukwirwa kwandakaitwa na tezvara Daddy vemurume wangu
Kusvira Mavy muroja munyowani we paden pedu.
Kusvira Mvana Nemwana Wayo pa Ghetto
Mboro mubeche raLandlord webabie rangu iro riri munext room!